नेकपामा अहिलेसम्म ओलीकै अध्यक्षता
काठमाडौं : नेकपामा दुई अध्यक्षको अधिकार क्षेत्र बराबर हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि टुंगो नलाग्दा बैठकको अध्यक्षता आलोपालो हुन सकेको छैन। पार्टी एकीकरणको सहमतिदेखि पार्टी विधानमा समेत आगामी एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षले बैठकको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता पहिलो हुने उल्लेख…
फेरि लम्बियो कोटेश्वर-कलंकी सडक निर्माण
काठमाडौं : चीनको अनुदानमा निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कोटेश्वर-कलंकी सडक निर्माणको समय फेरि थप भएको छ। अन्तिमपटक थप भएको समय असार ३१ (जुलाई १५) गते सकिने भए पनि काम नसकिँदा म्याद थप गर्नुपरेको हो। काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाका इन्जिनियर निराजन शर्माका अनुसार कोटेश्वर-सातदोबाटो-कलंकी सडक बिस्तारको समय फेरि थप भएको हो। …
वीरगन्ज — पर्सा प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको रानीघाटबाट ठूलो परिणामको रकमसहित एक हुन्डी कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अवैध रुपमा वित्तिय कारोबार सञ्चालन भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले महेश केशरीको घरमा आइतबार विहान छापा मारेको थियो । स्रोत नखुलेको एक करोड १५ लाख रुपैयाँ र विभिन्न…
फुजेल हत्याकाण्डका अभियुक्त छविलाल पौडेल जेल चलान
काठमाडौँ — गोरखा फुजेलका १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोपमा पुर्पक्ष थुनाको आदेशपछि फरार रहेका छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पुस ६ गते पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उनलाई तत्काल डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ । आफ्नो छोराका…
बनि नसक्दै भत्कियो मुग्लिन सडक
चितवन — निर्माण नसकिँदै नारायणगढ–मुग्लिन सडक भत्किन थालेको छ । जुगेडी नजिक भतेरीको जंगलमा झन्डै ५० मिटर सडक भत्केको हो । आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले त्यो ठाउँमा पुन: सडक बनाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । निर्माणाधिन नारायणगढ मुग्लिन सडकको जुगेडी भतेरी नजिक भत्केको सडक ।तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर…
भुकम्पपीडित दाबी गर्ने २० हजार फर्जी
काठमाडौं : आफूलाई भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि दाबी गर्ने २० हजारभन्दा बढी घरपरिवार मापदण्ड बाहिरकै भएको पाइएको छ । तीन वर्षको अवधिमा २० हजार ६ सय ९० घरपरिवारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आधारबिना दाबी गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट भूकम्पपीडित हुँ भनी लाभग्राहीको…
नियमावली टुंगो लागेपछि मात्र नेकपाको सांगठनिक एकीकरण
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नियमावलीले अन्तिम रुप पाएपछि मात्र सांगठनिक एकता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रस्तावित नियमावलीलाई असार २६ गतेभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। पार्टी स्थायी समिति बैठकले दिएको सुझावका…
तस्करीको नाका बन्दै बिपी राजमार्ग
सिन्धुली : ठला र साना गाडीको मापदण्डका विषयलाई लिएर एक महिनादेखि विवादमा परेको बिपी राजमार्गमा अवैध सामानको व्यापक ओसारपसार हुने गरेको पाइएको छ । ३३ किलो सुनकाण्डमा बिपी राजमार्ग प्रयोग गरिएको चर्चा नसेलाउँदै सोही मार्गमा अवैध सामानको ओसारपसार हुने गरेको पाइएको हो । स्थानीय तथा प्रहरीलाई आधार मान्ने हो भने अहिले दैनिकजसो बिपी…
रिमोट कन्ट्रोलले चलेको जीवन
जहाजको अन्तिम सिटमा ढोकानेर एयर होस्टेजले उनलाई पाखुरामा समाउँदै ल्याएर राखिदिइन्। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई जहाजमा यसरी नै ढोकानेर राखिदिने रहेछन्। उनी सुस्तसुस्त पाइला चाल्दै अगाडिको सिटको अड्याउनीमा दाहिने हातले समाएर आफ्नो सिटमा गएर बसे। यसरी बसे, मानौं घचक्क बस्यो भने आफ्नो भारले सिटलाई गाह्रो हुन्छ। सजिलो गरी बसिसकेपछि उनले…
डा. केसीको समर्थनमा राजधानीमा र्‍याली
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा र्‍याली निकालिएको छ । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली निकालिएको हो । र्‍यालीमा विवेकशिल साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र समेत सहभागी थिए । केसी जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन् । केसीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ । तस्बिर ः ज्ञानेन्द्र…
तिब्बत–ओलाङचुङगोला : सडक बन्यो, गाडी छैन
लेलेप (ताप्लेजुङ) — सडक निर्माण गरिरहँदा टिप्तालाभन्ज्याङ–ओलाङचुङगोला सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छेतेन वालुङलाई लागेको थियो– अब तिब्बत आउजाउ गर्न पैदलयात्रा गर्नुपर्ने छैन । गाउँटोलका बासिन्दालाई पनि उनले खुसीको खबर सुनाए । तर ट्रयाक खुलेको वर्ष दिनसम्म पनि यहाँका बासिन्दाले गाडी चढ्न पाएका छैनन् ।…